🥇 ▷ Isticmaalayaashu waxay ka cawdaan Appletablet oo madax adag ✅
Isticmaalayaashu waxay ka cawdaan Appletablet oo madax adag
Dhibaatooyinka ku jira qalooca ipad Pro Pro ayaa maqlaya halka kaliya dhif. Laakiin sida muuqata waxaa jiray khalad la socda barnaamijka ‘iPad Pro’ illaa iyo sanadka 2017 oo ka dhigaya adeegsiga kiniiniga mid aad u adag.
iPad Pro: Baadhitaanka taabashada aan la isku halleyn karin ee Apple Tablet Professional
Horaantii bishii Abriil ee la soo dhaafay waxaan soo sheegnay in milkiileyaasha barnaamijka ‘IP Pro’ laga soo bilaabo sannadihii 2017 iyo 2018 ay ku qasbanaadeen inay la dagaallamaan dhibaatooyinka khalkhalka u ah kiniiniyadooda. Gaar ahaan, waxay ku saabsan tahay aqoonsi la’aanta farta marka aad shaashadda taabaneyso. horumariye Steve Troughton-Smith mar kale soo jiitay dhibaatooyinka socda.
Waxaan ogaanayaa in iPad-kayga uu ka dhacayo dhamaan taabasho taabasho ah barnaamijka 13-ka guud ahaan, gaar ahaan markaan isticmaalayo barnaamijyada wax-ku-oolka ah. Rebootku wuxuu hagaajiyaa dhowr maalmood. Ma waxbaa iska baddalay dhacdada taabashada markay socoto? Kaliya waxaan ku sameeyay tweet-ka
– Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) Ogosto 26, 2019
Isla mar ahaantaana, Troughton-Smith waxay soo warinaysaa in soo gudbinta ka timid Apple Pencil, si kastaba ha noqotee, waxay sii wadi doontaa in la aqoonsado iyada oo aad taabaneyso fartaada oo ay iska indhatireyso kiniiniga Apple. Jawaabaha badankood waxay sharraxaan arrimahan tan iyo iOS 12. Mararka qaarkood, waxaa sidoo kale jira warbixino laga helayo adeegsadayaasha horey ula soo kulmay qaladka ku dhaca macruufka 11 iyo kiniiniyada ka weyn ama xitaa iPhones.
Rajada ah in dhibaatooyinka Apple ee sii deynta software-ka soo socda – iPadOS 13 ay ku jiraan meelaha bilowga ah – in la ciribtiro sidoo kale waa hooseysaa. Isticmaalayaasha saameynaya sidoo kale waxay ka cawdaan isla cayayaanka markay isticmaalayaan noocyadii ugu dambeeyay beta.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay soo saartay ‘IPOS 13’ jaleec ahaan:
Dhibaatooyinka taabashada ee iPad Pro: Daaweyn joogto ah looma yaqaan
Steve Troughton-Smith waxaa u digay adeegsade si yar oo tilmaam ah in Dhibaatadu waxay xallisaa ugu yaraan si ku meel gaadh ah, Markaa way ku filan tahay in kiniiniga la xidho si kooban “dib u deji” taabashada garashada ee shaashadda. Xal waara, marka laga reebo cabashada Apple iyo rajada laga qabo in qaabka is-weydaarsigu aanu lahayn dhibaatooyinka, wali ma jiraan. Rakib cusub ayaa sidoo kale hagaajin doonta qaladka oo keliya si ku meel gaar ah – iyadoo aan loo eegin inaad ciyaarayso gurmad duug ah iyo haddii kale.
Isticmaalayaasha saameynaya waa inay xaqiiqdii la xiriiraan Apple si ay u helaan aalad cusub iyadoo la raacayo damaanadda ama AppleCare. Ma cadda inta kiniinno ama moodello ay si sax ah u saameeyeen dhibaatada.